तीन जलविद्युत् कम्पनीको किर्ते सेयर कारोबार गर्ने कारबाहीमा - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
तीन जलविद्युत् कम्पनीको किर्ते सेयर कारोबार गर्ने कारबाहीमा
पुष २५, २०७४ 4235 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३ जलविद्युत् कम्पनीको किर्ते सेयर कारोबार गर्ने ३ सेयर दलाल कम्पनी तथा कार्यकारी प्रमुखलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । गत शुक्रबारको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बोर्डले कारबाही गरेको सूचना मंगलबार जारी गरेको छ । चिलिमे जलविद्युत्, नेशनल हाइड्रो पावर र सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनीको किर्ते सेयर कारोबार गर्ने अग्रवाल सेक्युरिटिज, श्रीहरि सेक्युरिटिज र सिप्रवी सेक्युरिटिजलाई कारबाहीको निर्णय गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
निज कम्पनीलाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ दफा ७ ‘फ’ खण्ड (ख) अनुसार कारबाही गरिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन र बोर्ड नियमावली उल्लंघन गर्दै चिलिमेको किर्ते सेयर कारोबारीमा संलग्न अग्रवाल सेक्युरिटिजलाई क्रमशः १० लाख र ५० हजार गरी १० लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
यसैगरी, नेशनल हाइड्रोको किर्ते कारोबारमा संलग्न श्रीहरि सेक्युरिटिजलाई पनि एउटै अर्थात् १० लाख र ५० हजार गरी १० लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (४) अनुसार दुवै दलाल कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखलाई ५०/५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
सिप्रवी सेक्युरिटजलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र यसका कार्यालय प्रमुखलाई सचेत गराइएको छ । समग्रमा बोर्डले तीनै कम्पनी र कार्यालय प्रमुखलाई साढे २२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
बोर्डले उक्त जलविद्युत् कम्पनीको किर्ते सेयर कारोबार गरेकोबारे छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारोबारी गोविन्द घिमिरे विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत असार २३ गते मुद्दासमेत दायर गरेको छ । घिमिरेले उल्लेखित दलाल कम्पनीमार्फत किर्ते सेयरकारोबार गरे/गराएको बोर्डले जनाएको छ ।